Educations,Jobs,Co-operations and Infrastructures skip to main |
Which income does it make you rich?
Weclome everyone to co-operation with Myanmar ,prouding to host the 27th of SEA Games ,national elections, foreign investment...
မြန်မာအစားအစာ ဘူဖေးလ်ဧည့်ခံလိုသူ မောင်နှမများအတွက့့့် 
မြန်မာအစားအစာ ဘူဖေးလ်ဧည့်ခံလိုသူ မောင်နှမများအတွက့့့်  : " ချစ်သောမောင်နှမများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ ဒီနေ့မှာတော့ စီဘောက်စ်ထဲမှာ မguine...
Money musht multiply at wealth producing rate of return How much money will you start your strategic business plan and retire ? Compare the capital use and invest high in annual growth rate....
Myanmar official holidays for 2011
Myanmar official holidays for 2011 : "4Jan 2011 - Independence Day (လွတ်လပ်ရေးနေ့)5Jan 2011 - ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ 12 Feb 2011 - Unio...
Voice News Journal from Myanmar
You can read this journal weekly online at http://www.naymyowai.co.cc/2009/08/voice-journal.html . 2011 Calendar.pdf - 4shared.com - document sharing - download - 2011 Calendar.pdf
2011 Calendar.pdf - 4shared.com - document sharing - download - <a href="http://www.4shared.com/document/1YdrMMWI/2011_Calendar.html...
To the Top Real Estate Classification in Myanmar
Something To Think About (BBC Learning)
STTA: The Easter story... Feed my sheep 25 Mar 14
Lindsey Chapman presents the final programme of the term. Today she is out and about exploring all the spring delights in her local park.
Education Oppourtinities , Career Development and Country Development Projects
Podictionary Upper- Intermediate
Sorry Podictionary listeners and readers. I have stepped away from the microphone (and keyboard) forawhile. I’ll update the podcast and blog when I have ...
ဒီနေ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ www.myanmaritmen.com ကို စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ အားလုံး လာရောက် လည်ပတ်လှည့်ပါဦးလို့ နွေးထွေးစွာ ဖိတ်...
"I would encourage to implement the development projects in vocational training, promoting adult literacy rate, infrastructure projects, health care ect., at our rakhine state .Government has just two hands which can not cover everything ."Rakhine Student at Philippine"We want to pursue free trade agreements outside the country . Stronger bilateral trade relations could help Uruguay expand education, improve health care, and generate jobs with adequate salaries.”Tabaré Vázquez ,Uruguay President , 2006 ."Individually all the adults need to literate and catch international standard education. Improving education is developing our country , training our adults for Human Resource development like Singapore which is country doesn't have too many resources but have many talented adults ." Rakhine Lecture at Yangon University,who is representative for Myanmar at ASEAN youth meeting in 2008 at Thailand .
How do you think ? No comments:
Interview with Billionaire Fund Manager - Paul B. Weiss
Undercover Boss USA-Choice Hotels Internation - Complete Episode
Myanmar Official Sea Games Song (+playlist)
Brian Tracy - Eat That Frog!: 21 Great Ways to Stop Procrastinating and ...
How to become rich immediately (+playlist)
Money musht multiply at wealth producing rate of return How much money will you start your strategic business plan and retire ? Compare the capital use and invest high in annual growth rate.
This is where all shangri-la job vacancies posted place.
This is where you can learn about your favourited subjects for free online. https://www.coursera.org/courses
အမျိုးသမီးများ အတွက် အထူး သင့်လျော်သော အစားအစာ ငါးမျိုး
အမျိုးသမီးများ အတွက် အထူး သင့်လျော်သော အစားအစာ ငါးမျိုး: "အရွက်များသော အသီးအရွက်များကို စားသုံးသင့်ပါတယ်။ အရွက်များတဲ့ အသီးအရွက်မျာကို နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့ အစားအစာများ စာရင်းထဲမှာ ထည့်သွင်း စားသုံးခြင်း မရှိပါက ခန္ဓာကို အဟာရ လိုအပ်မှုကို လုံလောက်စွာ ဖြည့်တင်း ပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ဟင်းနုနွယ်၊ ပဲတောင့်ရှည်၊ ကညွှတ်၊ ဆလတ်၊ ပဲနံ့သာစေ့၊ အစိမ်းရောင် ပန်းဂေါ်ဘီ၊ စတာတွေက အလွယ်တကူ ပေါများစွာ ရရှိနိုင်ပြီး အမျှင်ဓါတ်၊ ဗီတာမင် စီ၊ ကေနဲ့ ဖော်လစ်အက်ဆစ် ကြွယ်ဝတဲ့ အသီးအနှံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြင်အာရုံကို ပိုမို အားကောင်းလာစေပြီး ကယ်လ်ဆီယံ၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ သံဓါတ်၊ ပိုတက်ဆီယမ် စတဲ့ ဓါတ်တွေလည်း ပြည့်ဝစွာ ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်။ 'အမျှင်ဓါတ် ၉၆% ပါဝင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်၊ အဟာရဓါတ်တွေ ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်တဲ့ ကောက်နှံဟာလည်း အမျိုးသမီးများ စားသုံးသင့်တဲ့ အစားအစာ တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဂျုံနဲ့လုပ်တဲ့ ပေါင်မုန့်၊ ပီဇာ၊ ဆန်လုံးညို စတာတွေဟာ လုံလောက်တဲ့ အဟာရကို ပေးစွမ်း နိုင်တဲ့အပြင် ကိုယ်အလေးချိန် ကိုလည်း မတက်စေပါ။ 'ပဲကို စားသုံးခြင်းဖြင့် လိုအပ်တဲ့ ဓါတ်တွေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အသုပ်၊ မနက်ခင်းမုန့်၊ ဒိန်ချဉ် စတဲ့ အစားအစာ တွေနဲ့ ရောပြီး စားသုံးပါ။ ပဲမှာ ပရိုတင်း၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဘီတာမင် ဘီနဲ့ အီး စတဲ့ ဓါတ်တွေ ပေါကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါနဲ့ ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်းကို ကာကွယ် ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပဲမှာ နှလုံးကို ကောင်းမွန်စေတဲ့ အဆီ ကယ်လိုရီတွေ များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ နေ့လည်နေ့ခင်း သွားရေစာ အဖြစ်လည်း စားသုံးေ ပးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလွန်အကျွံတော့ မစားသင့်ပါတယ်။ တပတ်ကို လက်တဆုတ် စာလောက် စားသုံးပေးရင်ပဲ အတော်လေး လုံလောက် နေပါပြီ။'မလိုင်ကင်းတဲ့ ဒိန်ချဉ်ဟာလည်း ဗီတာမင်၊ ပရိုတင်း၊ ကယ်လ်ဆီယမ်ဓါတ် ပေါကွယ်ဝစွာ ပါဝင်တာကြောင့် အမျိုးသမီးများ စားသုံးရမယ့် အစားအစာ တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်မှာ ရောဂါ ပိုးမွှားတွေကို တိုက်ဖျက် ပေးနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီယားတွေ ပါဝင် နေပါတယ်။ တပတ်ကို သုံးလေးခွက်လောက် သောက်သုံးပေးပါ။ သောက်တဲ့အခါမှာ သကြားထည့် မသောက်ပဲ ဒီအတိုင်း ဒိန်ချဉ်ချည်းပဲ သောက်၊ ဒါမှမဟုတ် အသီးတမျိုးမျိုးရောပြီး သောက်တာဟာ ပိုပြီး ကောင်းပါတယ်။'ဘယ်ရီသီးဟာ အမျှင်ပေါတဲ့ အစားအစာ တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရာမှာလည်း အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဘယ်ရီသီးမှာ ဓါတ်တိုး ဆန့်ကျင်ပစ္စည်း ပေါကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင် ပစ္စည်းဟာ ရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်မှုကို လျော့ကျစေပြီး၊ မှတ်သားနိုင်စွမ်း လျော့နည်း လာမှုကိုလည်း အကာအကွယ် ပေးပါတယ်။ တပတ်ကို အနေတော် ပန်းကန်လုံး သုံးလုံးစာလောက် စားသုံးပေးပါ။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဘယ်ရီသီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြောက်ခံ၊ အအေးခံထားတဲ့ ဘယ်ရီးသီးပဲဖြစ်ဖြစ် အာနိသင်က အတူတူပါပဲ။ ကောင်းမွန် အကျိုးပြုနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (အိန္ဒိယတိုင်းမ်)''"
Stop Life Cycle by Vipasana
ကံကို မစီမံချင်ရင်၊ မပြုလုပ်ချင်ရင် ကံကို ဖြတ်တောက်ပစ်ရမှာပါ။ ကုသိုလ်ကံ၊ အကုသိုလ်ကံ ၂-မျိုးလုံးကို ဖြတ်တောက်ပစ်ရမှာပါ။ ဖိနပ်အကောင်းစားစီးပြီး ပြေးတဲ့လူနဲ့ ဖိနပ်အစုတ်/ ဖိနပ်မပါဘဲ ပြေးတဲ့လူ- မောတာချင်းကတော့ အတူတူပါပဲ။ အပြေးရပ်မှကို ချမ်းသာမှာပါ။အပြေးရပ်သလို ကံဖြတ်ဖို့ဆိုရင် ရဟန္တာဖြစ်မှ ကံကပြတ်မှာပါ။ ရဟန္တာဟာ ကုသိုလ်ကံကိုလည်း ဖြတ်ပြီးပါပြီ။ အကုသိုလ်ကံကိုလည်း ဖြတ်ပြီးပါပြီ။ ရဟန္တာကို ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် မပြုသူလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ရဟန္တာများပြုတဲ့ ကုသိုလ်များဟာ ကုသိုလ်မမည်တော့ဘဲ ပြုကာမတ္တ ကြိယာသာ မည်ပါတော့တယ်။ အဆံမအောင်တဲ့ မျိုးစေ့လို အပင်ကို မဖြစ်စေတော့တဲ့အတွက် မျိုးစေ့အဖြစ်သုံးလို့ မဖြစ်တော့ပါဘူး။ မျိုးစေ့မဟုတ်တဲ့ သစ်စေ့လို ကုသိုလ်မဟုတ်တဲ့ ကြိယာ ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲဒီတော့ ရဟန္တာတွေလို ကံပြတ်သွားအောင် ကံဖြတ်ရပါမယ်။ ကံကို ဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုတော့... ဝိပဿနာကုသိုလ်ကံကို ပြုရင်းနဲ့ပဲ ဖြတ်ရမှာပါ။ ဝိပဿနာကုသိုလ်ကံတွေ ပြုပါများတော့ ဝိပဿနာဥာဏ်တွေ ရင့်သန်လာပြီး အဆင့်ဆင့် အရိယာမဂ်၊ ဖိုလ်တို့ရဲ့ နောက်ဆုံး အရဟတ္တမဂ်ဥာဏ်ကိုရပြီး သံသရာလည်စေတတ်တဲ့ ကံအားလုံး ပြတ်သွားတော့တာပါပဲ။ မရှိတော့တဲ့ကံက ဘာကိုများ စီမံနိုင်ဦးမှာတဲ့လဲ ...။
March 22: Long-Term MBA Planning (Online)
March 22: Long-Term MBA Planning (Online): "Applying to business school in 2011? 2012? By taking action now, you can dramatically improve your chances of gaining admission toatop MBA program in the coming years. Indeed, it is never too soon (and certainly not too late) to take several crucial steps to shape your MBA candidacy. Join mbaMission Founder Jeremy Shinewald as he leads prospective applicants throughaLong-Term Planning Seminar. Topics of discussion will include the following:* Creating Your Ten-Month (and Beyond) Timeline* Maximizing the Impact of Community Activities* Accelerating Personal Goals* Building an Alternative Transcript* Taking and Retaking the GMAT* Making the Most of Campus Visits* Understanding the Differences Between MBA Programs* More…Date: Tuesday, March 22, 2011Time: 1:00-2:30 p.m. ESTLocation: Online at Beat the GMATPrice: Free!To register for this event, please click here."
2011 Calendar.pdf - 4shared.com - document sharing - download - 2011 Calendar.pdf
2011 Calendar.pdf - 4shared.com - document sharing - download - <a href="http://www.4shared.com/document/1YdrMMWI/2011_Calendar.html" target="_blank">2011 Calendar.pdf</a>
How to Motivate Your Employees Toward Your Goals
How to Motivate Your Employees Toward Your Goals: "In any company, strong work ethic and success on employees is not impossible withagood manager or boss plus the company's solid motivational structure. Co-workers are the ones who always interact with each other. They are the ones who constantly meet and work."
Getting Back to Exercise: "A few months ago, I started working withaclient who'd been away from exercise for almost2years. Coming back after suchalong break wasn't easy. She kept thinking about how strong she used to be, making her workouts, literally, an exercise in frustration. Takingabreak from exercise doesn't mean you'reafailure, but it can sure feel that way the first time you test your body with exercises you used to breeze through with no problem. So how do you get past that? How do you focus on the present instead of dwelling on the past?A while back I asked my readers to talk about how they get back to exercise afterabreak. I got some great responses, but my favorite was posted by About.com Guest OMPilates who said:'When I go back to exercising afterabreak, I focus on the good things. For example, I'm refreshed and my technique is often better. I'm also inaplace to make and see changes in my form that I couldn't when I was in my routine. It doesn't take that long to get strength and flexibility back -afew weeks maybe - so I don't worry about that.'I love that kind of positive attitude, but I'll bet most of us spend more time kicking ourselves for past mistakes than accepting where we are and going from there. If you're struggling to get back to exercise afteralong winter, there are things you can do to make the process easier, and I think the most important is to admit where you went wrong and forgive yourself.What do you think? Have you gotten off track with exercise and, if so, how did you get past the guilt? Leaveacomment or share your story here, telling us all about how to come back from an exercise break."
Making the Transition From "Worker" to Leader
Making the Transition From "Worker" to Leader: "Investing time to set managers up for success is critical for their future as leaders. More than half of managers receive no training before startingamanagement position."
Leadership Styles - Organisational Behaviour & Human Resources Managemen...
Live for the Future and Survive Success - Mark Forchette (OptiMedica): "As CEO of OptiMedica, Mark Forchette guides the company's continuing efforts to successfully deliver innovative medical technologies to market. In this lecture, he shares entrepreneurial lessons learned throughout his career, and discusses the importance of setting objectives and executing tactical plans. Forchette also touches upon the value of thorough preparation and overcoming early failures."
Myanmar official holidays for 2011: "4 Jan 2011 - Independence Day (လွတ်လပ်ရေးနေ့)5 Jan 2011 - ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့12 Feb 2011 - Union Day (ပြည်ထောင်စုနေ့)2 Mar 2011 - Peasants' Day (တောင်သူလယ်သမားနေ့)19 Mar 2011 - Full Moon Day of Tabaung (တပေါင်း လပြည့်နေ့)27 Mar 2011 - Armed Forces Day (တပ်မတော်နေ့)12-16 Apr 2011 - Thingyan (Water Festival) 17-21 Apr 2011 - Myanmar New Year1 May 2011 - May Day (အလုပ်သမားနေ့)17 May 2011 - Full Moon Day of Kasone (ကဆုန် လပြည့်နေ့)15 Jul 2011 - Full Moon Day of Waso (၀ါဆို လပြည့်နေ့)19 Jul 2011 -Martyr's Day (အာဇာနည်နေ့)12 Oct 2011 - Full Moon Day of Thadingyut (သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့)1 Nov 2011 - Full Moon Day of Tazaungmon (တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့)10 Nov 2011(တန်ဆောင်းမုန်းလဆုတ် ၁၀ ရက်) - National Day (အမျိုးသားနေ့)25 Dec 2011 - Christmas Day (ခရစ်စမတ်နေ့)Total Myanmar Public Holidays for 2011 = 24 Days"
Sleep Loss = Brain Drain - John Medina, author "Brain Rules"
Increasing Restaurant Revenue : Restaurant Revenue & Specific Language
Increasing Restaurant Revenue : Restaurant Revenue & Finding the Lead Buyer
Increasing Restaurant Revenue : Restaurant Revenue & Dropping Off the Check
Increasing Restaurant Revenue : Restaurant Revenue: Uniforms & Table Ass...
Increasing Restaurant Revenue : Restaurant Revenue & Training Servers
Help Your Staff Achieve Their New Year's Resolutions and Watch Your Bottom Line Grow
Help Your Staff Achieve Their New Year's Resolutions and Watch Your Bottom Line Grow: "Well what if you were able to makeaperson feel more 'loved' by helping them achieve personal goals or milestones. What if you, in your capacity asamanager, could makealife changing impact on someone in your team?"
သြစတြေးလျလူဝင်မှု့ ကြီးကြပ်ရေးမှ July 2011 တွင်စတင်ကျင့်သုံးမည့် ပွိုင့်စနစ်အသစ်
သြစတြေးလျလူဝင်မှု့ ကြီးကြပ်ရေးမှ July 2011 တွင်စတင်ကျင့်သုံးမည့် ပွိုင့်စနစ်အသစ်: "သြစတြေးလျ လူဝင်မှု့ ကြီးကြပ်ရေးမှ သြစတြေးလျ နိုင်ငံမှာ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေမယ့် သူတွေအတွက် Point System နဲ့Pass Mark တွေကို အသစ် ထုတ်ပြန် လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်၊၊ ဒီ ထုတ်ပြန် ကြေငြာချက်ကို Australian Minister for Immigration and Citizenship မှ Mr Chris Bowen က နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့မှာပြောကြားသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်၊၊ အဆိုပါ စနစ်သစ်ကို လာမယ့် July 2011 မှာစတင်အကောင်အထည်ဖေါ်မှာဖြစ်ပြီး၊ အဓိက အချက်တွေ အနေနဲ့Skill Immigration ဗီဇာလျောက်ထားတဲ့သူတွေရဲ့ ၊ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံရှိတဲ့လူတွေကို ဦးစားပေးခြင်း၊ အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်မှု့ လိုအပ်ချက် ပိုမြင့်မား လာခြင်း၊ ပညာရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များမြင့်မားလာခြင်း၊ စတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းအချက်များ တင်ပြနိုင်မှု့ အပေါ်မှာ ပွိုင့်စနစ်တွေနဲ့ ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်၊၊ ဒီစနစ်သစ်ဟာ သြစတြေးလျမှာ ကျောင်းလျောက်ထားမဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသူတွေ သိရမယ့် အချက်တွေ ပါဝင်တဲ့ အတွက်၊ အဆိုပါ ပွိုင့် စနစ်သစ်များအကြောင်းကို၊ CROWN Education ရုံးခန်း၊ Summit Parkview မှာ နိုဝင်ဘာလ (၂၉) ရက်နေ့၊ တနင်္လာနေ့နံနက် (၁၀ ) နာရီမှ (၁၁ ) အထိ ရှင်းလင်း ပြောကြားသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်၊၊ ယခုထုပ်ပြန်ချက်အရ သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်အလုပ်လျောက်ထားမယ့် သူတစ် ယောက်ဟာ၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၀ မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Skilled Occupation List (SOL) အတိုင်း ရာနူန်းပြည့်ဆုံးဖြတ်မှာမဟုတ်ပဲ၊ အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်မှု့ ၊ ပညာ အရည်အချင်း၊ အလုပ်အတွေ့ အကြုံစတဲ့အချက်တွေကိုပါထည့်သွင်းဆုံးဖြတ်ဖို့အ သစ်ပြ ဌာန်းချက် မှာထည့်သွင်းထားပါတယ်၊၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၀ မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ကတော့ အလုပ် လျောက်ထားသူတွေရဲ့အလုပ်ရာထူး အမျိုးအစား အလိုက် ဗီဇာကို လက်ခံ စဉ်းစားမယ်လို့ ဖေါ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊၊ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခု အနေနဲ့ယခု ပွိုင့်စနစ်သစ်အရ နိုင်ငံတကာ ဘွဲ့ ရထားတဲ့သူ တွေကိုလည်း အသိ အမှတ်ပြုမှာဖြစ်ပြီး၊ ပညာ ရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်မှာဆိုရင်၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင်းမှာ ပညာသင်ပြီး၊ ဘွဲ့ရထား တယ် ဆိုရင်တောင်၊ အဆင့်သိပ်မမြင့်တဲ့ Qualification တွေဆိုရင်ပွိုင့်ရမှတ်နည်းမယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊၊ အသစ်ပြဌာန်းမဲ့ ပွိုင်းစနစ်အရ သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေဖို့အသက် (၂၅) နှစ်က (၃၂) နှစ်အရွယ်တွေကို ပွိုင့်ပိုရနိုင်ပါတယ်၊၊ အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှု့ပိုရှိတဲ့သူနဲ့ ပညာရေးနဲ့ အလုပ်အကိုင်အတွေ့အကြုံပိုများတဲသူတွေက တစ်ခြားသူ တွေထက် ဦးစားပေးခံရနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်၊၊ အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှု့ ကိုလည်း IELTS 7.0 အတွက် (၁၀) မှတ်နဲ့IELTS 8.0 အတွက် (၂၀)မှတ်ရရှိမှာဖြစ်ပြီး၊ IELTS 6.0 ဆိုရင် တစ်မှတ်မှ မရနိုင်ဘူးလို့ သိရပါတယ်၊၊ “ယခုအ ပြောင်းအလဲက ကျောင်းသား ဗီဇာ လျောက်ထားတဲ့သူတွေအတွက် တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပေမဲ့ ကျောင်းပြီးလို့ အလုပ် ရှာတဲ့အခါ အရေးကြီး လာပါတယ်၊၊ ဒါကြောင့် အလုပ်အတွေ့ အကြုံလိုလိုအပ်ချက်ကိုတော့ ကျောင်း မလျောက်ခင် ထဲက ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားဖို့ လိုသလို ၊ မိမိတို့ လေ့လာသင်ယူမဲ့ ဘာသာရပ်ရဲ့ အဆင့်အတန်း၊ IELTS အသစ်လိုအပ်ချက်၊ ဘာသာရပ် ရွေးချယ်တာ၊ Level ရွေးချယ်တာတွေက အရေးကြီးလာပါလိမ့်မယ်၊၊ ဒီအချက်တွေကိုသိရဖို့ရှင်းလင်းပြောကြားမှာဖြစ်တယ်လို့ ” CROWN Education မှာ ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဦးအောင် ကျော်ဆန်းကပြောပါတယ်၊၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို CROWN Education, Summit Parkview Hotel, အခန်း ၂၂၈-၂၂၉, ဖုန်း ၂၁၁ ၈၈၈ လိုင်းခွဲ (၂၂၈) နှင့် ၊ ၀၉ ၅၀၈၅ ၁၈၅ တို့ တွင်ဆက်သွယ်စုံးစမ်းနိုင်ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်၊၊ (သြစတြေးလျလူဝင်မှု့ ကြီးကြပ်ရေးမှ မူရင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို CROWN Eudcation သို့ ဆက်သွယ် ရယူနိုင်ပါသည်။) ﻿"
Sharpen Your Axe!: "﻿ A Young man who graduated yesterday and stops learning today will become uneducated tomorrow. “နှစ်သစ်ကူးမှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ၊ လူငယ်တွေကို ကျွန်တော် Message လေးတစ်ခုခုပေးခြင်နေပါတယ်၊၊ ဒါနဲ့ ကျွန်တော့် ဖိုင့်အဟောင်းတွေထဲက “Sharpen Your Axe” ဆိုတာလေး သွားတွေ့ ပြီး၊ ကြိုးစားဆီလျှော်အောင်ပြန်ဆိုထားပါတယ်၊၊” ဂျွန်က သစ်ခုတ်လှဲတဲ့ ကုမ္မဏီက ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ၊၊ သူဒီအလုပ်လုပ်နေတာ (၅) နှစ်ရောက်တဲ့တိုင် လုပ်ခလည်း မတိုး၊ ရာထူးလည်းမတိုးခဲ့ပါဘူး၊၊ ကုမ္မဏီက ဘီလ် ဆိုတဲ့ သစ်ခုတ်လှဲတဲ့သူ တစ်ယောက်ကို ထပ်ငှားခဲ့ပြီး၊ သူက တော့ တစ်နှစ် အတွင်း ရားထူးတက်သွားခဲ့ပါတယ်၊၊ ဒီကိစ္စက ဂျွန်ကို တော်တော် လေး စိတ်အနှောက် အယှက်ဖြစ်ခဲ့ တော့သူ့ ဌေးနဲ့ တွေ့ ပြီး ဒါကိုမေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်၊၊ အဲဒီအခါ သူ့ သူဌေးရှင်းပြတာကတော့ “ မင်းအခုခုတ်လှဲနေတဲ့ သစ်ပင်အရေအတွက်က လွန်ခဲ့တဲ့(၅)နှစ်ကလည်း ဒီအပင်အရေအတွက်ပဲကွ” “ငါတို့ ကုမ္မဏီက အလုပ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ ရလာဒ်ပေါ်မှာသာ ကြည့်တဲ့ ကုမ္မဏီမျိုး ဆိုတော့၊ မင်း ခုတ်လှဲတဲ့အရေအတွက် တိုးတက်လာတယ်ဆိုရင်၊ မင်းကို တိုးပေးရမှာပေါ့” လို့ပြောပါသတဲ့၊၊ ဒါနဲ့ ဂျွန်လဲ တောထဲပြန်သွားပြီး၊ အချိန်တော်တော်ကြာကြိုးကြိုးစားစားခုတ်ပါတော့တယ်၊၊ ဒါပေမဲ့ သူအရေအတွက် ပိုပြီး မခုတ်နိုင်တာနဲ့သူ့ သူဌေးဆီပြန်သွားပြီး သူ့ရဲ့ အခက်အခဲနဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ရှင်းပြတဲ့အခါ သူ့ ဌေးက ဘီလ် ဆီကို သွားပြီးမေးဘို့ အကြံပေးပါတယ်၊၊ “ သူ့ ဆီမှာ မင်းမသိထားတဲ့အချက်တစ်ခုခုရှိနေနိုင်တယ်ကွ..သွား…မင်း ဘီလ်ကို သွားမေး” လို့ လမ်းညွှန်ရှာပါတယ်၊၊ ဂျွန်ကလည်း ဘီလ်နဲ့ တွေ့ တဲ့ အခါ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီသစ်ပင်တွေ ပိုပြီးခုတ်လှဲနိုင်သလဲမေးတဲ့အခါ ဘီလ်က၊ “ ငါသစ်ပင် တွေ ခုတ်ပြီးတဲ့အခါ ခဏနားပြီး ငါ့ ပုဆိန်ကို ငါ သွေးတော့တာပဲကွ” လို့ ဖြေသတဲ့၊၊ နောက်ပြီးဘီလ် ဆက်မေး လိုက်တဲ့ မေးခွန်း ကဂျွန်ကို တော်တော်လေးေ တွဝေသွားစေခဲ့ပါသတဲ့... “မင်း ဘယ်တုန်းက မင်းပုဆိန်ကို နောက်ဆုံးသွေးခဲ့တာလဲကွ…” တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်အကိုင်တွေ ကြိုးစားစားတော့ လုပ်ကြပြီး ရလာဒ်တွေ မကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော် တို့ပုဆိန်ကို သွေးဘို့ လိုနေ တာဖြစ် နိုင်ပါတယ်၊၊ သွေးစရာ နေရာမရှိလို့ သွေးရမည့် ကျောက်မကောင်းလို့ ၊ သွေးရမဲ့ အချိန်မရှိလို့ ဆိုတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ပါဘူး၊၊ ရတာနေရာမှာ ရသလောက် သွေးကြရပါမယ်၊၊ ဘ၀မှာတိုးတက်မှု့တွေလိုခြင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဘယ် နေရာကိုပဲ ရောက် ရောက် ကျွန်တော်တို့ဗဟုသုတ၊ အတွေးအမြင်၊ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု့ တွေကို ဖြည့်ဆည်း နေဖို့ လိုပါတယ်၊၊ (Sharpen Your AXE ကို ဆီလျှော်ပြန်ဆိုထားပါသည်၊၊ Aung Kyaw San@James)﻿"
How to Prepare for GRE: "Loads of people ask me this question - How do I start my preparation for the GRE exam? I normally just point them to this blog. But even people who visit greghost.blogspot.com ask this question in the comments section. So i decided to writeashort guide on preparing for the Graduate Record Examination.Firstly, make sure that when you register for the test, you have at least3months to study! Anything less than that is educational suicide - unless you're in the IIT...Secondly, there is no such strategy which says that you should start studying from the Verbal section and then move on to Quants or vice-versa. Start with whatever you are comfortable with! I started preparing with the verbal section because my language skills are far better than my mathematical skills. Starting your preparation with something you find easy helps defuse stress and arouse interest in what you're studying.The GRE preparation study is never ending...you can't have enough practice in maths and almost nobody can memorize the meanings of all those thousands of words. So these2things - Quants and Words - should be universal in your preparation, i.e. you should study them every day even as you set up targets for the more particular sections.Those who are good with English should not get overconfident. The reading comprehension section can be quite tricky. Its not like those simple comprehension passages that you get in your 10th and 12th standard board exams.Some of the books I recommend for GRE preparation you will find on the right sidebar of this blog. Quiteafew are available on this blog for free download if you know where to look (just click in the right places!) make your preparationamixture of online and offline study. I always recommend number2.com for their short mock tests.Finally, dont procrastinate (if you don't know the meaning of this word, your GRE preparation is lagging!). Laziness never did you any good and never will. If you find it difficult to study in the morning, then beanight bird and work hard.Once you think you have studied enough, start giving the mock test in the ETS powerprep CD. That test will give youagood indication of where you stand. Identify your weak areas from the result of the test and try to strengthen them with practice. As the Bhagwad Gita says, 'karma kar, Fal ki Chinta Mat kar' . May the force be with you!Those who have already given their GRE are most welcome to share their experiences and provide tips in the comments section."
If You Are A Leader: "Most of the organizations are trying to achieve the business results and the customer satisfaction as their ultimate goals. These two goals are correlated each other. If you are focusing on achieving the business results, you must haveagood strategy to maintain the level of customer satisfaction to your organization's service and products. Otherwise, you may lose your customers even though you may achieve the business results inashort-term. It will giveanegative impact on your business results in the long run. On the other hand, you may lose your business results if you only focusing on the customer satisfaction but you do not have proper revenue strategy and expense management. This article will explore more about balancing focus and efforts on two important goals for an organization to succeed in the long run."
မြန်မာအစားအစာ ဘူဖေးလ်ဧည့်ခံလိုသူ မောင်နှမများအတွက့့့် : "ချစ်သောမောင်နှမများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ ဒီနေ့မှာတော့ စီဘောက်စ်ထဲမှာ မguiness လာမေးထားတဲ့ "မြန်မာအစားအစာတွေ ဘူဖေးလ်ကျွေးချင်လို့ပါနော် ၁၁. ၇ အမှီပေါ့" ဆိုတော့ အမြန်ဆုံး စဉ်းစားပေးပြီး မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဘယ်နိုင်ငံမှာနေတာလဲ၊ ဘယ်လူမျိုးနဲ့ လူဦးရေ ဘယ်လောက်ကို ကျွေးချင်တာလဲ ဆိုတာရယ်၊ ချက်ပြုတ်မယ့် လူအင်အား ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတွေရယ်ကို မသိလိုက်လို့ ၀ိုင်းတော်သား ကိုတုတ်ကြီးနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားစီစဉ်ပေးလိုက်ပါ တယ်နော်။ဘူဖေးကျွေးတဲ့အခါ အဆင်ပြေရအောင်လို့ Appetizer, Main Course နဲ့ Dessert ဆိုပြီး အဓိက သုံးမျိုး ခွဲပြီး လုပ်ပေးထားပါမယ်နော်။ စစချင်း Appetizer အတွက် အသုပ်လေးတွေနဲ့ စရင်ကောင်းမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်နော်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသုပ်လေးတွေဖြစ်တဲ့ မြင်းခွာရွက်သုပ်၊ ဂေါ်ဖီသုပ်၊ ကျောက်ပွင့်သုပ်၊ မန်ကျည်းရွက်နုသုပ်၊ ပဲကြာဆံသုပ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးသုပ် စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ၊ ၀ယ်လို့ရမယ့်ပစ္စည်း ပေါ် မူတည်ပြီး အဆင်ပြေမယ့်အသုပ်ကို အနည်းဆုံး (၃) မျိုးလောက် ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်နော်။ဒါ့အပြင် ဗယာကြော်၊ ကြက်သွန်ကြော်၊ ကော်ပြန့်ကြော်၊ ဆမူဆာကြော် စသဖြင့်ပေါ့လေ၊ အရွယ်လေးတွေကိုတော့ တစ်ခါဝါးစားရင် အနေတော်ရှိမည့် အရွယ်လေး တွေပေါ့၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း အာလူးကတ်သလိတ်လိုမျိုးပေ့ါနော်။ အဲ့ဒါလေးတွေကို အချဉ်ရည် ကောင်းကောင်းလေးဖျော် ပြီး ဆလတ်ရွက်လေးတွေနဲ့ ထည့်ပေးလို့ရသေးတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိချက်၊ ဂွေးသီးငါးပိချက်၊ ငါးပိစိမ်းစားသုပ် စတာတွေကို သခွားသီး၊ ခရမ်းကြွပ်သီး၊ ဆတ်လတ်ရွက်၊ ရုံးပတီသီးရေနွေးဖျော၊ မျှစ်နုလေး၊ သရက်သီးစိမ်း စတဲ့အသီးအရွက်တွေနဲ့လည်း တည်ခင်းပေးလို့ရပါတယ်နော်။ အထူးအဆန်းလေးဖြစ်သွားအောင် မြန်မာအစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ နန်းကြီးသုပ်လို၊ ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲသုပ်လိုမျိုးကို အရသာရှိရှိ သုပ်ထားပြီး တစ်ပွဲလောက် ချထားပေးလို့ ရပါတယ်နော်။Main Course အတွက်ကတော့ ကြက်သား၊ ၀က်သား၊ ဆိတ်သား၊ ငါး၊ ပုစွန်၊ ပြည်ကြီးငါး စတာတွေကို ချက်ပြီး ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ ၀က်သားသုံးထပ်သားကို နာနတ်သီးလေးနဲ့ အအီပြေအောင်ချက်၊ ဒါမှမဟုတ် ၀က်သားအသားကို အချိုချက်လေး နူးအိအိလေးချက်၊ ဒါမှမဟုတ် ၀က်ကလီစာလေးတွေကို စတူးလေးလုပ်၊ တစ်ခြားတစ်ခု ကတော့ ၀က်နံရိုးကို နူးအိနေအောင်ချက်ပြီးတော့မှ ကြံမဆိုင်လေးအုပ် ရေကျန်ဆီကျန် လေးချက်၊ အဲ့ မြန်မာဆန်ဆန် လေး ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ၀က်သားပုန်းရည်ကြီးလေးချက် လိုက်ဦးနော်။ကြက်သားကိုတော့ အာလူးလေးနဲ့ ရိုးရိုးချက်တာမျိုးလည်း ထည့်လို့ရသလို ကြက်သား အုန်းနို့နဲ့ ပင်စိမ်းလေးအုပ်ပြီး ချက်တာလည်း ချက်လို့ရပါတယ်နော်။ ဒါမှ မဟုတ်ရင်လည်း ကြက်သားကို မာဆလာလေးအုပ်ပြီးချက်ပါနော်။ ငါးကိုတော့ ငါးနဲ့ ရှီတာကေးမှိုနဲ့ အချိုချက်လေးပေါ့၊ အဲ့ဒါမျိုးလေး ချက်ကြည့်ပါ ဦးနော်။ ငါးကြီးသားကို အလယ်ရိုးနဲ့ ဘေးဆူးတောင်တွေ မပါအောင် ကိုင်ပြီးတော့မှ အသားတုံးလေးတွေချည်း လှီးယူပါနော်။ ပြီးတော့ ချင်းရည်တွေနဲ့ နယ်ပြီး ဆား၊ သကြားတို့နဲ့အတူရောနယ်ပြီး ၁ နာရီလောက် နှပ်ထားပါနော်။ ပြီးတော့ ကြက်သွန်ဖြူ ဓားပြားရိုက်ရယ် ကြက်သွန်နီ လေးစိပ်ထိုးကို နှမ်းဆီမွှေးလေးနဲ့ ဆီသတ်ပြီး ငါးတွေထည့်ပြီး အသာအယာလေး မွှေပေးပါနော်။ ပြီးရင် ရေစိမ်ထားတဲ့ ရှီတာကေးမှိုလေးတွေကို ထည့်ပြီး တည်ပေးပါနော်။ ရေခမ်းလောက်ရင် ရေကို ငါးနဲ့ မှိုမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး ထပ်တည်ပေးပြီးတော့ အရသာ အပေါ့အငံမြည်းပြီး ချလိုက်ပါနော်။ ဟင်းပွဲပြင်တဲ့အခါမှာတော့ ကြက်သွန်မြိတ်လေး ဖြစ်ဖြစ်၊ ပင်စိမ်းရွက်လေးဖြစ်ဖြစ် အုပ်ပြီး ချပေးပါနော်။ တကယ်လို့ ချိုချဉ်အရသာလေး ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ငရုတ်သီးစိမ်းရယ်၊ ရှာလကာရည်လေးရယ်ထည့်ပေးပါနော်။ အဲ့ဒါဆိုရင် ငါးက ညှီလည်းမညှီဘဲ အရသာလေးတစ်မျိုးနဲ့ စားလို့ကောင်းပါတယ်နော်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ငါးဖယ်ကို ဆီလေးထဲ အပေါ်ယံတင်းရုံ ကြော်ပြီးတော့ အုန်းနို့လေးနဲ့ ချက်တာမျိုးလည်း ကောင်းပါတယ် နော်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ငါးခူရဲယိုရွက်၊ ငါးရံ့အူဟင်း၊ ငါးဥဟင်း၊ ငါးကြော်နှပ် စတာတွေလည်း ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်နော်။ဆိတ်သား၊ အမဲသားတို့ကိုတော့ အတုံးခပ်လတ်လတ်တုံးပြီးတော့ နူးနူးအိအိလေး နှပ်တာမျိုး ချက်လို့ရသလို ငရုတ်သီးအရောင်လှလှလေးနဲ့ချက်၊ ကြက်သွန်နီအကွင်းလိုက် လေးရယ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးလေးတွေရယ်၊ ငရုတ်ပွကြီးတွေနဲ့ထည့်၊ ပူစီနံလေးတွေ အုပ်ပြီး ခပတ်လို ချက်ရင်လည်း ကောင်းပါတယ်နော်။တချို့ကလေ အသားတွေ မစားဘဲ ပင်လယ်စာပဲ စားတတ်တဲ့သူတွေ ပါတတ်တော့ ငါးတို့ ပုစွန်တို့ ပြည်ကြီးငါးတို့ကို ထည့်ပေးရပါမယ်နော်။ ပုစွန်တို့ ပြည်ကြီးငါးတို့ကို ဟင်း အဖြစ်ချက်လိုက်တာထက် အသုပ်လေးတွေ သုပ်ပေးလိုက်ရင် ပိုပြီး အရသာရှိစေပြီး ဟင်းပွဲကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ဖြစ်စေပါတယ်နော်။ ပုစွန်အစိမ်းသုပ်တို့၊ ငါးအစိမ်းသုပ်တို့လည်း ထည့်လို့ရပါ တယ်နော်။အသီးအရွက်အတွက်ကတော့ ချဉ်ပေါင်ကြော်၊ မှိုကန်စွန်းရွက်ကြော်၊ အစိမ်းကြော်၊ အာလူးအချိုချက်၊ ဟင်းနုနယ်ရွက်ကြော်၊ ရွှေဖယုံသီးနှပ်၊ ရုံးပတီသီးနှပ်၊ ခရမ်းသီးနှပ်၊ ပဲသီးတောင့်ကြော်၊ ခ၀ဲသီးကြော်၊ ဗုံလုံသီးနှပ်၊ ကြက်ဟင်းခါးသီးကြော် စသဖြင်ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ မြန်မာအစားအစာတွေထဲ မပါမဖြစ် ဘာလချောင်ကြော်၊ ငံပြာရည်ကြော်၊ ငါးနီတူခြောက်ကြော်၊ ငါးခြောက်ထောင်းကြော်စတာလေးတွေလည်း ထည့်ပေးပါဦးနော်။အရည်သောက်အတွက်ကတော့ သီးစုံပဲကုလားဟင်း၊ ပဲနီလေးကြာဆံဟင်းရည် စတာတွေအပြင် စွန်ထန်ဟင်းရည်၊ ကြံမဆိုင်ဟင်းရည်၊ တုံယမ်းဟင်းရည်၊ ၀က်နံရိုး ကျောက်ဖရုံသီးဟင်းရည်၊ ချဉ်ပေါင်ရွက်ဟင်းရည် စတာတွေကိုလည်း ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်နော်။အချိုပွဲအတွက်ကတော့ ရာသီပေါ် အသီးအနှံတွေ အနည်းဆုံး (၃) မျိုးကနေ (၅) မျိုးထိ ပါမယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာဆန်ဆန် ဆိုရင် ကန်စွန်းဥနဲ့သာကူကျိုလေး၊ ကျောက်ကျော လေး၊ ဆနွင်းမကင်းလေး၊ ကောက်ညှင်းကင်၊ မုန့်လင်မယား၊ ဘိန်းမုန့်၊ ရွှေရင်အေး၊ မုန့်လက်ဆောင်း အစရှိတာတွေ ထည့်ပေးလိုက်နိုင်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်နော်။လက်ဘက်ရည်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ဧည့်ခံချင်ရင် လက်ဘက်ခြောက် အချိုခြောက် နှပ်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါဦးနော်။ လက်ဘက်ခြောက် အချိုခြောက် မရှိခဲ့ရင် Lipton tea အထုပ် ၂၀ ကို နှပ်တဲ့နည်းလေးပေါ့။ အဲ့ဒါဆိုရင် လက်ဘက်ရည် ခွက် (၂၀) လောက် ထွက်မယ်နော်။ ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူအောင် အရင်တည်ထားပါနော်။ ပြီးရင် အ၀တ်နဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ ရေစစ်ထဲကို Lipton Tea ထုပ်လေးတွေ ထည့်ပေးပါ၊ ပြီးတော့ ထောပတ် (ဂီး) လက်ဘက်စားဇွန်း ၃ ဇွန်းထည့်ပါ၊ ဆား လက်ဘက်စားဇွန်း (၁) ဇွန်းထည့်ပါ။ ပြီးတော့မှ ရေနွေးအိုးထဲကို ရေစစ်လေးထည့်၊ အဖုံးပိတ်ပြီး (၁၅) မိနစ်၊ မိနစ် (၂၅) လောက် နှပ်ပေးပါ နော်။ ပြီးတော့ ရလာတဲ့ လက်ဘက်ခြောက်နှပ်ရည်နဲ့မှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရသာအတိုင်း ရအောင် နွားနို့၊ သကြား၊ နို့ဆီ စတာတွေထည့်ပြီး ဖျော်ပါနော်။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ မြန်မာအလွမ်းပြေ လက်ဘက်ရည်ကောင်းကောင်းလေး ရနိုင်ပါ တယ်နော်။ရေသန့်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကောက်ညှင်းမွှေးလက်ဘက်ခြောက်ခပ်ထားတဲ့ ရေနွေးလေးနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒါလေးတော့ထည့်ပေးပါဦး နော်။ ရေနွေးကြမ်းနဲ့ မြည်းဖို့ကတော့ အမဲခြောက်၊ ဆတ်သားခြောက်ဖုတ်၊ ငါးခြောက်ဖုတ်၊ မြေပဲယို၊ နှမ်းယို၊ အာဒါလွတ်ပြုတ် ဆီဆမ်း၊ ပဲမြစ်ပြုတ်ဆီဆမ်း၊ ထန်းမြစ်ပြုတ်ဆီဆမ်း၊ ပြောင်းဖူးပြုတ်သုပ် စတာတွေပေါ့နော်။အဲ့့့  နောက်ဆုံးပိတ်တော့ မေ့မလို့ လက်ဘက်နှပ်လေးလည်း ထည့်ပေးပါဦးနော်။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ဘူဖေးလ်ကျွေးမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။ တခြားမောင်နှမတွေလည်း အကြံကောင်းများရှိတယ်ဆိုရင် ထပ်ဖြည့်ပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်။ မguiness လည်း နောက်သိချင်တာများ ရှိခဲ့ရင် မေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဓာတ်ပုံကို ဂူဂဲလ်ကနေ ရှာထည့်ထားတာပါနော်။"
ငရုတ်ဆော့စ်: "မောင်နှမများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ ငရုတ်ဆော့စ်လို့ခေါ်တဲ့ ငရုတ်ဆီလုပ်နည်းကို ညီမလေး မေ က စီဘောက်စ်ကနေ တဆင့် မေးထားလို့ အလွယ်နည်းလေးကို မောင်နှမများအားလုံးအတွက် မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်။ငရုတ်ဆီကိုတော့ စမူဆာ၊ ကော်ပြန့်လိပ်နဲ့တို့စားတာကအစ ၀က်သားဒုတ်ထိုး၊ ကြာဆံကြော်၊ ခေါက်ဆွဲကြော်၊ ထမင်းကြော်၊ ကြေးအိုး၊ အသုပ်စုံ စသဖြင့် အစားအစာ စုံမှာ မဖြစ်မနေ တွဲဖက်စားသုံးလေ့ရှိကြပါတယ်နော်။ ငရုတ်ဆီမပါရင် စားလို့မကောင်းတဲ့ အစားအစာတွေလည်း မနည်းလှပေဘူးကိုး။လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ ငရုတ်သီးအစပ် (ခပ်စပ်စပ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင် လက်ဖ၀ါးနဲ့ နှစ်ဆုပ်စာ)၊ အရောင်လှစေဖို့ ငရုတ်သီး အပုပွတောင့် ၅ တောင့်၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၁ ကီလို ဒါမှမဟုတ် ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ် ၀ယ်လို့ရတယ်ဆိုရင် ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ်ဗူး ၂ ဗူး၊ ပြီးတော့ ကြက်သွန်ဖြူ ၅ မွှာ၊ ကြက်သွန်နီ အရွယ်တော်လေး ၁ လုံး၊ ရှာလကာရည် ၅ လက်ဖက်စားဇွန်း(တချို့ရှာလကာရည်က အချဉ်ပေါ့တယ်ဆိုရင်တော့ ပိုထည့်နော်)၊ သကြားအနည်းငယ်နဲ့ ဆားအနည်းငယ်တို့ပါနော်။ငရုတ်သီးက အရမ်းပူတတ်တာမို့ တကယ်တမ်း ကိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာနည်းအရတော့ လက်အိပ်တွေ ဘာတွေ စွပ်မနေဘဲ လက်ကို ဆီလေး သုပ်ပြီးမှ ကိုင်တတ်ကြတာနော်။ လက်အရေပြား သိပ်ပါးရင်တော့ ပူမှာစိုးရသလို ငရုတ်သီးကိုင်ထားမိတဲ့ လက်နဲ့ ဟိုကိုင်ဒီကိုင်လုပ်မိမှာလည်း စိုးရသေးတယ်နော်။ ဒါကြောင့်မို့ တစ်ခါသုံး လက်အိပ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ် စွပ်ပြီး ကိုင်ပေါ့နော်။ပြီးရင် ငရုတ်သီးကို အညှာခြွေ၊ အစေ့ထုတ်ပစ်ပါ။ ခရမ်းသီးကိုလည်း ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီး အစေ့တွေ ဖယ်ရှားပစ်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီတို့ကိုလည်း အခွံနွှာ ရေဆေးပေးပါ။အားလုံး အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ ငရုတ်သီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကြက်သွန်ဖြူနီတို့ကို ကြိတ်စက်ထဲ ထည့်ပြီး ကြိတ်ပေးပါနော်။ တော်တော်လေး ညက်အောင်ကြိတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကြိတ်ပြီးသား အဆာပလာတွေထဲကို ရှာလကာရည်၊ ဆား၊ သကြား စတာတွေ အကုန်ရောပြီးတော့ အိုးတစ်လုံးထဲ ထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ်မှာ မီးနွေးနွေးနဲ့ ဖြေးဖြေးချင်း ကျိုပေးပါနော်။ အချိန်ကတော့ ကြာပါလိမ့်မယ်နော်။ ဒါပေမယ့် မီးနွေးနွေးနဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ကျိုပေးပါနော်။ ကျိုနေရင်းနဲ့ ငရုတ်သီးနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးနှစ်တွေ ဗွက်ဗွက်မြည်လာပါလိမ့်မယ်နော်။ အဲ့ဒီအချိန်ကျရင် အရသာကို မြည်းကြည့်ပြီးတော့ လိုချင်တဲ့အရသာလေး နည်းနည်းထပ်ဖြည့်ပေါ့နော်။ ပြီးရင်တော့ အအေးခံပြီး၊ ပုလင်းသန့်သန့်၊ ဗူးသန့်သန့်ထဲထည့်၊ စားချင်သလောက် ယူစား၊ ကျန်တာကို ရေခဲသေတ္တာထဲသာ ထည့်သိမ်းထားလိုက်ပေါ့နော်။ ဇွန်းသန့်သန့်နဲ့ ခပ်ပါနော်။ နောက်မဟုတ်ရင် မှိုတက်တာတွေ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်မှာ စိုးလို့ပါ။ဒါကတော့ လက်ဝင်သလားတော့မပြောတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အရမ်းတော့ လက်မ၀င်လောက်ဘူးနော်။ ငရုတ်သီးကြောင့် လက်ပူလောင်မှာပဲ စိုးတာ။ အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။ အိမ်မှာလုပ်တာဆိုတော့ ဗိုက်နာမှာလည်း မစိုးရတော့ဘူးပေါ့လေ။ စမ်းကြည့်ပါဦးနော်။ ဓာတ်ပုံတော့ မရှိလို့ မတင်လိုက်တော့ဘူးနော်။အဆင်ပြေပါစေနော်။"
Sent to you by aunthan via Google Reader: How to GrowaCreative Business According to the Laws of Chance via News International Broadcast Media Lectures on 11/05/10 First of four lectures exploring the relationship between creativity and commerce through the prism of late 20th and early 21st century TV fiction on both sides of the Atlantic. Recording date: 2010-02-02; Location: St. Anne's College, Oxford Things you can do from here: Subscribe to News International Broadcast Media Lectures using Google Reader Get started using Google Reader to easily keep up with all your favourite sites Posted by
Train the Restaurant Staff Every Day
Have water near you
Have water near you at all times.Throwawater bottle in your bag, keep one at your desk, fill upacup and put it next to you when watching TV—even if you don’t feel thirsty. If it’s in front of you, you’re more likely to drink it, and less likely to walk to the fridge or vending machine forasoda.Drinkaglass first thing in the morning before you shower, turn on the coffee pot, or go about your daily routine. Putaglass of water on your nightstand, so when you hit the alarm, it’ll be right there asareminder to drink up! This is especially important because at breakfast, you’ll likely have coffee or tea, which dehydrate you. You’ll getajump-start on hydration before you even sip your morning coffee. Eat juicy fruit. Oranges, peaches, berries, grapes—the juicier, the better. That “juice” is mostly water. For example,acup of cubed watermelon containsahalf-cup of water!
Check your heart by cholestrol
Blood Preasure 125/75 is 'normal'. 1.Cholesterol is found in every cell in your body. Cholesterol is used by your body to build healthy cells, as well as some vital hormones. When you have high cholesterol, you may develop fatty deposits in your blood vessels. Eventually, these deposits make it difficult for enough blood to flow through your arteries. Your heart may not get as much oxygen-rich blood as it needs, which increases the risk ofaheart attack. Decreased blood flow to your brain can causeastroke. 2.If you regularly eat more calories than you burn, you may have high triglycerides (hypertriglyceridemia). Triglycerides areatype of fat found in your blood. When you eat, your body converts any calories it doesn't need to use right away into triglycerides. The triglycerides are stored in your fat cells. Later, hormones release triglycerides for energy .High triglycerides are oftenasign of other conditions that increase the risk of heart disease and stroke as well, including obesity and the metabolic syndrome —acluster of conditions that includes too much fat around the waist, high blood pressure, high triglycerides, high blood sugar and abnormal cholesterol levels. Sometimes high triglycerides areasign of poorly controlled type2diabetes, low levels of thyroid hormones (hypothyroidism), liver or kidney disease, or rare genetic conditions that affect how your body converts fat to energy. High triglycerides could also beaside effect of taking medications such as beta blockers, birth control pills, diuretics, steroids or the breast cancer drug tamoxifen. Healthy lifestyle choices are key. Lose excess pounds. If you're overweight, losing the excess pounds can help lower your triglycerides. Motivate yourself by focusing on the benefits of losing weight, such as more energy and improved health. Cut back on calories. Remember that excess calories are converted to triglycerides and stored as fat. Reducing your calories will reduce triglycerides. Avoid sugary and refined foods. Simple carbohydrates, such as sugar and foods made with white flour, can causeasudden increase in insulin production. This can increase triglycerides. Limit the cholesterol in your diet. Aim for no more than 300 milligrams (mg) of cholesteroladay — or less than 200 mg if you have heart disease. Avoid the most concentrated sources of cholesterol, including meats high in saturated fat, egg yolks and whole milk products. Choose healthier fats. Trade saturated fat for healthier monounsaturated fat, found in olive, peanut and canola oils. Substitute fish high in omega-3 fatty acids — such as mackerel and salmon — for red meat. Eliminate trans fat. Trans fat can be found in fried foods and many commercial baked products, such as cookies, crackers and snack cakes. But don't rely on packages that are labeled "trans fat-free." In the United States, ifafood contains less than 0.5 grams of trans fat per serving, it can be labeled trans fat-free. Even though those amounts seem small, they can add up quickly if you eatalot of foods containing small amounts of trans fat. Instead, read the ingredients list. You can tell thatafood has trans fat in it if it contains partially hydrogenated oil. Avoid alcoholic beverages. Alcohol is high in calories and sugar and hasaparticularly potent effect on triglycerides. Even small amounts of alcohol can raise triglyceride levels. Exercise regularly. Aim for at least 30 minutes of physical activity on most or all days of the week. Regular exercise can boost "good" cholesterol while lowering "bad" cholesterol and triglycerides. Takeabrisk daily walk, swim laps or join an exercise group. If you don't have time to exercise for 30 minutes, try squeezing it in 10 minutes atatime. Takeashort walk, climb the stairs at work, or try some sit-ups or push-ups as you watch television. Treatment:Ifaperson's serum cholesterol level indicates that there isapotential problem, his doctor can prescribe appropriate treatment. This might include lifestyle modifications such as exercise and diet changes or medication. Prevention:Problems withaperson's serum cholesterol level can often be avoided through avoiding dietary fats and exercising regularly. However, genetics also playarole in cholesterol level. Ifahealthy serum cholesterol level cannot be maintained byahealthy lifestyle, medication may be necessary. http://www.mayoclinic.com/health/triglycerides/CL00015
Boost immune system Immunization needs to beapart of our daily regimen. That means eating lots of fruits and vegetables and getting exercise.Drink lemon water, eat protein food , drink plenty of water, stop drinking coffee etc., in order to boost your immune system.You can also make sure you are getting enough vitamin A, C, B6, B12, and E, and the minerals iodine, selenium, and zinc.vitamins are always good for the immune system.you should take daily 400 gms of uncooked cucumber( or 100 gms of radish) and3betel leaves daily.you should avoid smoking and alcohol.kumrao99@yahoo.co.in
Advices to Study
The three best sleep strategies:Start jogging 20 minutes or 20 to 25 kmaday in three timeaweek.Without exercise, you can't control yourself physically and mentally,including sleeping right time,working excellent in job, relationship with colleagues ,critical thinking.1.Get away from the computer or the television half an hour before bed: Because you are basically staring intoalight bulb, your body chemistry is tricked into thinking it is day time. Melatonin isahormone that signals to your body to go to sleep, its release is impaired when you are exposed to light (Yes, your body knows when it's light or dark.) So get inadim place, maybe wear sunglasses around the house and do something like readabook! You probably need to read more books anyway.2.Keep environment quiet:Block out voices, tick-tocks, barking dogs, and random mechanical noises. Spend $2 and you can buy several pair lasting you up to one year; They can be used long term. My first pair I used for six months, so disregard the notion of discarding after one use or washing your hands prior to use.3.Air Circulation: Useasmall plug-in fan or an overhead fan to create air circulation. Fresh air circulation is imperative forahealthy sleeping environment; But fans are also useful for creating white noise (which will help lull you to sleep.) But let's get real, sometimes fans and vents have irregular rattling or make sporadic noises. So get ear plugs to knock out all but the white noise. Ear plugs + Fans = A 1, 2,3strategy for creatingafresh, peaceful sleep environment.http://www.trickstutorials.com/index.php?page=content/sleeps
Myanmar English Online Translater and Dictionary
Myanamr E books and FM Radio Live
Please enjoy reading our Myanmar E-books free of charge.http://swanbros.blogspot.com/2005/11/free-myanmar-ebooks.htmlOnline Myanmar FM Radio Livehttp://www.myanmardaily.net/onlineradio.html
Stop trying To MultitaskMultitasking can’t be done except with unconscious processes such as walking and talking. If you try to consciously multitask like make the kids lunches, haveatelephone conversation and try and get the kids ready for school it can’t be done nearly as effectively as doing each task separately. Multitasking stresses out minds and helps to produce bad results.Exercise Your Mind Not Just Your BodyWe all know the benefits of exercising the body but exercising the mind by doing crosswords, maths puzzles, playing chess, reading, anagrams, sudoku etc, all help to increase the minds capacity for learning. Always Have A Good BreakfastWe underestimate the power of food to keep our brains healthy and our minds alive with energy. If you don’t eat that much, make sure you haveagood breakfast to set you up for the day.Do the Thing You Fear the Most.If there’s one thing that will change your thoughts quicker than anything else, it’s facing your fears.Don’t Talk Just ListenEnhance your listening skills by not talking when someone is speaking to you. Resist the urge to speak your views when someone is talking to you, just listen to them and ask them more open ended questions at the appropriate times. This has two benefits: a) You can really listen if you are not formulating the stories in your own head when someone is talking b) you will make the other person feel great as you are actively listening to them. Write Your Future Life StoryStart from the age you are just now and start writing your future life story as you’d like it to be. Be as outrageous as you want and just write about your ideal life and how you interact with it. Words on paper are powerful and can help shape your goals.Make Love RegularlyReleasing the feel good chemicals, endorphins, into your bloodstream isagreat way to stimulate the mind. I have to admit to feeling much more creative after making love. List All Your WorriesMakealist of every single worry you have at the moment. You will notice that you don’t have as many worries as you thought. Worrying consumes our thinking and we think our whole life is one big worry. When you get it down on paper it’s extremely surprising that you don’t have as many as you’d thought.Stand onaChair for5Minutes Per DayBuilding self discipline isagreat way to take control of your mind and your thoughts. If you just get up and stand onasturdy chair your mind will be wondering what the hells going on and try and force you to get off the chair. Disciplining your mind isagreat way to start changing your life.Write An Article About YourselfImagineanewspaper has asked you to write an article of 1000 words or less about yourself and your life and they want to know what motivates you in life, now write the article. This helps put your life into some perspective and gets you thinking about your childhood and growing up.Stop Contact With Your Down PeopleIf you have people in your life who constantly drag you down, or are negative all the time, drop them. Honestly drop them from your life, you are not serving them and they are not serving you and they are dragging your thoughts down.Listen To MusicThis stimulates the mind and can have tremendous benefits for your thoughts, therefore your life. I love listening to Baroque music whilst driving at night, I love rousing rock driving during the day and dance trance music at the weekend whist driving Listen To A Book Instead Of The RadioGetting downloadable books from Amazon.com or Audible.com isagreat way to spend long journeys and learn something at the same time.Drink Coffee And TeaDespite evidence to the contrary coffee and tea have been shown to help the brain. Antioxidants and/or caffeine may help fight the onset of Alzheimer’s by 30-60% drinking 30 cupsaday is obviously not good but 3-5 cups per day is okay.Practice PatienceWaiting in queues, traffic jams, onatelephone call can be very frustrating sometimes. If you use the time to develop your mind and focus on your goals your frustration will dissipate very quickly. Use free time like this constructively instead of getting angry and putting yourself inabad mood.Read The DictionaryLearninganew word every2-3 days will increase your vocabulary by 120 – 170 words per year.Reference:http://www.stevenaitchison.co.uk/blog/2009/09/27/100-ways-to-develop-your-mind/
Buddha Teaching Talk in English
Dr Min Tin Mon Talk http://www.dhammadownload.com/Dr-MehmTinMon-wma-English.htmAll Avaliable Talk http://www.dhammadownload.com/AudioInEnglish.htm
Everyone can email to athzem@gmail.com for free posting at this website about products,services,announcements,trainings,anythings www.myanmarclassifiedzone.com
Get weather updated in your blog
About weather forecast in your city ,get your weather updated gadget at http://netweather.accuweather.com/signup-page1.asp?partner=&traveler=0
How to manage your counter online?
Get sign up, copy and paste the counter code link into blogger. http://www.99counters.com
International Maps Detail
Find out world maps http://www.mapsofworld.com/asia-political-map.htm
Get smart quizs about money and many things
Get smart about Money http://people.howstuffworks.com/quizzes.htm
Consider to change career
Changing careers doesn’t have to be scary so long as you are prepared for the change. Make sure that you always keep your resume and references current. Stay in touch with how satisfied and happy you are with your current job. Do thorough research on other careers that interest you.Ifacareer change is not possible for you right now, consider approaching your supervisor with ideas on how to revamp or relocate your current position in order to make it more satisfying and meaningful for you.http://www.careercoachinc.com/article_career_change_8_reasons.html
Invest in the working women
In Latin American countries,where there are many migrant workers, women are often left behind to take care of their families, taking on jobs such as hairdressers, artisans, caterers and childcare providers.These working women are often part of the informal economy, selling what they make or do in informal markets. To help them become part of the formal economy, INSEAD has been taking part in the recently-created 10,000 Women programme. The programme was initiated in March 2008 by Goldman Sachs, which is donating US$100 million (or $1,000 each to 10,000 women) over five years. The money will help improve the entrepreneurial skills of working women in 16 countries by giving them access toaworld-class business and management education.Students enrol in locally-designed certificate programmes ranging from five weeks to six months that include courses such as marketing, accounting, market research, writingabusiness plan, strategic planning, accessing capital, and e-commerce. The programme is free for the selected women. In Brazilatotal of 500 women will be chosen. To qualify, candidates must have been running their own businesses for at least two years and have finished secondary school.Because only some 14 per cent of Brazilian entrepreneurs have college degrees and 30 per cent have not even finished grade school, the programme is not restricted to women with college degrees and knowledge of the English language.Reference:Invest in the working women by Rob Goldsmith Posted by
Emergency Donation for Education of Unoin of Myanmar
All of Myanmar Adults who are living oversea need to save and make funds for the private donations monthly or yearly to children,schools ,teachers,teaching equipments in Myanmar , through the UN organizations like UNICEF or local INGOs .If you can contact your family and relatives email and Internet without using international phone call , you can savealot of money for them partly.http://www.youtube.com/watch?v=-bF1W45tKyA&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=tc30kv2RjZEhttp://www.youtube.com/watch?v=CzufXYdSbMYPlease watch this video clips and suggest how to support for children in every states and devisions of Myanmar.
How to sleep early after duty finishing ?
You are not alone in this!You must eat dinner before 7.30 pm , walk after dinner, Don't watch TV & browse the internet after 9.00 pm. Every day start sleeping ten min earlier.Go out and make some good friends who haveaclear goal,ahigher purpose in life and, spend your time and energy in social service,agood sport or game. Make itapoint to go to bed atagiven time regularly and start/end the day with good thoughts/prayer, it helps.Yahoo Answer
How does Rural Development is so important for first step of developing nation?
What do our nation need to change into positive ways and how to co-operative with the Rural Developing Countries ? http://www.ourfutureplanet.org/newsletters/resources/IIED-Working%20Paper%20Series%20on%20Rural-Urban%20Interactions%20and%20Livelihood%20strategies.pdfhttp://siteresources.worldbank.org/INTEAPREGTOPRURDEV/Resources/573691-1141228934263/2280904-1141235339090/Vietnam-RD-Strategy-07.pdf
Classified and Flight Schedule News in Myanmar
Advisement or announcaments about Job,Services,Trainings,Language Classes,Public Notes,Rent & sell Properties in Myanmar.http://www.mmtimes.com/2010/classi/classi.pdfAslo daily ASIA & domestic flight schedules in Myanmarhttp://www.mmtimes.com/2010/flight/f505.pdf
The U.S. Embassy in Rangoon is particularly interested in individuals with skills in political and economic affairs; Burmese media and public relations; information management and network computer skills; financial management; procurement; architecture and building maintenance.Please sendaletter and curriculum vitae (resume) or application form to: Human Resources Office, U.S. Embassy Rangoon, 110 University Ave, (GPO-521), 111 81 Yangon or via e-mail to HRORangoon@state.gov.If you send inaresume, we will review it, but you will not automatically receive an acknowledgement. Candidates selected for an interview will be contacted.
Top Markets for English Learners1.Immigration in USA,Canada,UK,Austria2.Brazil3.Japan & Korea4.Italy & FranceThe above countries get first priority for visits,workships&seminors
How do you think ? 1 comment:
Does Myanmar isacountry or nationality of Union of Myanmar?
THE NATIONALITIES OF MYANMARMyanmar’s ethnically diverse population isaresult of three major migrations from Tibet and Central Asia, the cradle of humanity. The people of Myanmar are descendants of three main branches: The Mon- Khmer, the Tibeto- Burman, and the Thai- Chinese. The Kaya, Mon, Wa, La, Palaung, Pale, Yao, Riang, Padaung, Yinbaw, Zayein, and others originated from the Mon-Khmer group, while the Shan, Kayin and Taungthu, etc., find their roots in the Thai- Chinese community. The Bamar, Chin, Kachin, Lolo, Rahkine, Kadu, Hpon, Maru, Lashi, Rawang, Azi, Nung, Daru, Yaw, Mro, Inthat, Naga, Gauri, Lisu, Lahu, among others, evolved from the Tibeto- Burman group.http://www.myanmar.gov.mm/ministry/hotel/gl/gl-people.htm
Weather Forecast for Yangon , Unoin of Myanmar
Weclome everyone to co-operation with Myanmar ,prouding to host the 27th of SEA Games ,national elections, foreign investments and national oversea investments in Myanmar .The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry UMFCCI http://www.umfcci.com.mm/foreword.htmlMyanmar Productshttp://www.umfcci.com.mm/showcase.htmlInternational Trade Fairshttp://www.umfcci.com.mm/internationaltradefair.htmlTrade Association in Myanmarhttp://www.umfcci.com.mm/tradeasso.htmlInvestment Opportunities in Myanmarhttp://www.mnped.gov.mm/Business.aspBusiness Report in Myanmarhttp://www.unescap.org/tid/artnet/mtg/bridging_s2myanmar.pdfAsia Development Bank Report for Myanmarhttp://www.aseansec.org/asti/ASTI_Import_myanmar.pdfGovernance matter in Myanmarhttp://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/c146.pdf
There are 29 interactive learning games of various sorts and degrees of difficulties. Most of them also includesa"Read more" about the subject.Enjoy learning!http://nobelprize.org/educational_games/all_productions.php?sort=games
Human Rights report is factually incorrect, says UAE
"It is unfortunate that HRW Rreport repeats old issues and does not document any new developments or international recognition that the UAE has received for its improving human rights track record especially in the field of labour".Source:www.Gulfnews.com
International Exposition (INTEX) Dubai
International Exposition (INTEX) Dubai and many Exhibitions,Trade Shows ,Discussions and Seminors on this website.http://www.4to40.com/fairs_and_exhibitions/index.asp?fairid=4061
"သချာင်္မတတ်ရင် လူ့ဘ၀ရဲ့ ၆ပုံ၂ပုံကို ခင်ဗျားဆုံးရှုံးမယ်" "ရူပဗေဒ မတတ်ရင် လူ့ဘ၀ရဲ့ ၆ပုံ၁ပုံကို ဆုံးရှုံးမယ်" "ကွန်ပြူတာ မတတ်ရင် လူ့ဘ၀ရဲ့ ၆ပုံ၁ပုံကို ဆုံးရှုံးမယ်..ခင်ဗျားရဲ့ ဘ၀ ၆ပုံ၎ပုံဟာ ဆုံးရှုံးသွားပြီပဲ" ထိုခဏအတွင်း ရာသီဥတု ပြောင်းပြီး ကောင်းကင်တွင် တိမ်ညိုများ တက်လာသည်။ မကြာမီ မိုးသက်လေပြင်း ကျရောက်တော့မည်။ ထိုအခါ လှေသမားက ဆရာအား " ခင်ဗျား ရေကူးတတ်သလား" ဟုမေးလိုက်သည်။ ဆရာက ခဏမျှ ဆွံအပြီး "ကျွန်တော် မကူးတတ်ဘူး။ တစ်ခါမှ မသင်ဖူးဘူး" ဟုပြန်ဖြေလေသည်။ လှေသမားမှာ ခေါင်းကိုသွင်သွင် ရမ်းပြီး.." ဒါဆိုရင် ခင်ဗျားရဲ့ဘ၀ ၆ပုံစလုံးဟာ ဆုံးရှုံးရတော့မယ်" ဟု ပြန်ဖြေခဲ့သည်။http://myanmardaily.net/index.html
We need to save and make fund for the private education assistance monthly or yearly to chlidrens ,adults,schools ,teachers,teaching equipments in Myanmar by co-operating with the UN organizations like UNICEF or local and international NGOs .If you can contact your family and relatives email and Internet without using international phone call , you can save for same amount of money for them partly and liitle by little .http://www.youtube.com/watch?v=-bF1W45tKyA&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=tc30kv2RjZEhttp://www.youtube.com/watch?v=CzufXYdSbMY
Most of us rely on our project goals to somehow produce our life goals, as if satisfaction of our life goals would flow naturally from accomplishment of our project goals. Without any direction, there’s no reason to assume that this will happen – and I’d venture that most of the frustration and bitterness many people feel about their careers and their lives stems precisely from the failure of their work to produceameaningful life.How can we plan towards life goals?One reason it’s so hard to plan in the traditional sense towards life goals is that there isagreat deal of uncertainty at every possible step. If your life goal is to runacorporation and you’re in the mail room, there are so many factors that are out of your control between where you are and where you want to end up that planning seems ridiculous.
Ready to buy investments interests 10% above in Myanmar Central bank
နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုယ်စားမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည်လက်ရှိထုတ်ဝေရောင်းချနေသော သုံးနှစ်နှင့် ငါးနှစ် အစိုးရ ငွေတိုက်စာချုပ်များအားအပြင် နှစ်နှစ်သက်တမ်းရှိအစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်များကို ၂၀၁၀ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ရက်မှ စတင်၍ထပ်မံတိုးချဲ့ထုတ်ဝေရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ အဖွဲ့အစည်းအလိုက်ဖြစ်စေ၊တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ လွတ်လပ်စွာဝယ်ယူနိုင်သည်။ အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ် အမျိုးအစားများနှင့်အတိုးနှုန်းများမှာ သက်တမ်းနှစ်နှစ်တွင်ငွေကျပ်တစ်သောင်း၊တစ်သိန်း၊တစ်သန်း၊၁၀သန်းအတွက်အတိုးနှုန်း ၁၀ဒသမ ၅ရာခိုင်နှုန်း၊သက်တမ်းသုံးနှစ်တွင်ငွေကျပ်တစ်သောင်း၊ တစ်သိန်း၊ တစ်သန်း၊ ၁၀သန်းအတွက်အတိုးနှုန်း ၁၁ဒသမ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းနှင့် သက်တမ်း ငါးနှစ်တွင် ငွေကျပ်တစ်သောင်း၊တစ်သိန်း၊တစ်သန်း၊ ၁၀သန်းအတွက်အတိုးနှုန်း ၁၁ဒသမ၅ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။အတိုးငွေများကိုနှစ်ဝက်တစ်ကြိမ် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် မတ် ၁၅ရက်နှင့်စက်တင်ဘာ ၁၅ရက်တို့တွင် ထုတ်ယူနိုင်သည်။ ထို့အပြင် စာချုပ်များကို လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့်ရှိသည်။အစိုးရ ငွေတိုက် စာချုပ်များကို နေပြည်တော်၌ မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်(ရုံးချုပ်)(နေပြည်တော်) ဘဏ်များဇုန်မြတ်ပန်းသဇင်လမ်းတွင်လည်းကောင်း၊ရန်ကုန်မြို့၌ မြန်မာ့ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်အမှတ်(၂၁/၂၅)ဆူးလေဘုရားလမ်းနှင့်မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ငွေစုဘဏ်ခွဲ (၁) ၊ (၂) ၊ (၃) ၊ (၄) တို့တွင် လည်းကောင်း၊မန္တလေးမြို့၌ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် ဘဏ်ခွဲ(၁)၊(၂)၊(၃)တို့တွင်လည်းကောင်း တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင
"Best way of increasing my awful pronunciation is VOA Special English Radio Programs . I usually listen to the same news many times, then I try to write what I am listening and then I compare on VOA's page if I did it right. After doing this for almostayear, I did the test of University of Michigan and guess what!! I passed. ""I listen to your program and print any article from your Internet Web site every night."Each Special English broadcast is 30 minutes long. Most begin with world news, followed byashort report, thena15 minute feature ,includingIssues that affect people in developing countriesNews about farming and food productionThe latest research about diseases and medical adviceNew developments in American educationTraditions, ideas and life in the United StatesReports about the latest scientific discoveries and medical newsReports about outer space and the world around usA series about the history of the United StatesNews about business and finance in the U.S. and around the worldIn-depth reports aboutaperson or event in the newsFeatures about American idioms and expressionsA magazine show about popular culture and musicAdaptations of short stories, children's books and original stories.Biographies of influential Americans in history, politics, science, business, sports & entertainmentInternet users can also listen to programs on the Special English Web site while reading the text. And they can receive scripts of features by e-mail. In countries around the world, many English teachers require their students to listen to Special English.
Development Assistance from the United States to IndonesiaThe U.S. Agency for International Development (USAID) and its predecessor agencies have provided development assistance to Indonesia since 1950. Initial assistance focused on the most urgent needs, including food aid, infrastructure rehabilitation, health care, and training. Throughout the 1970s and 1980s,atime of great economic growth in Indonesia, USAID playedamajor role in helping the country achieve self-sufficiency in rice production and in reducing the birthrate. Today, USAID assistance programs focus on basic and higher education, democratic and decentralized governance, economic growth, health, water, sanitation, and the environment.Future programs will placeagreater emphasis on energy. The United States was one of the lead donors in the reconstruction efforts in the tsunami-hit area of Aceh. Most of the U.S. tsunami relief program is complete, although our efforts toward the construction of the Aceh west coast highway continues. The U.S. will remain actively engaged in conflict prevention and resolution efforts in Aceh.Improving the Quality of Education: In October 2003, President Bush announceda$157 million Indonesia Education Initiative for 2004-2009 to improve the quality of education in Indonesia. This initiative isacornerstone of the U.S. Government assistance program in Indonesia, directly responding to Indonesia's priorities and reflectingajoint Indonesia-U.S. commitment to revitalize education for the next generation of Indonesia's leaders. Since the initiative began in 2005, more than 1,476 schools, 23,612 educators, and 345,983 students have benefited from the assistance to improve teaching and learning, education governance, community involvement in school management, and public-private alliances. The initiative has also sparked donor interest toward increased coordination and cooperation both at the national and field levels. By 2010, the program will promote ownership of new methods for delivering basic education assistance directly to the local level where it can be more effectively and accountably targeted. Programs include:Decentralized Basic Education (DBE): As the main component of the Indonesia Education Initiative, the Decentralized Basic Education Project focuses on improving the quality and relevance of basic education in primary and junior secondary schools. Through technical assistance and training, the program has three goals: to assist local governments and communities to manage education services more effectively; to enhance teaching and learning to improve student performance in key subjects such as math, science, and reading; and to ensure that Indonesia’s youth gain more relevant life and work skills to better compete for jobs in the modern economy. USAID successfully utilizes public-private alliances to mobilize corporate sector resources for education. In partnership with ConocoPhillips, USAID is helping rehabilitate schools damaged by the May 2006 earthquake in Yogyakarta as well as Central Java; and Intel is helping teachers use technology in their classrooms. Partnerships with three U.S. universities--the University of Pittsburg, Florida State University, and the University of Massachusetts--and 14 Indonesian universities are enabling teachers participating in the program to receive academic credit for their work, helping them meet new Government of Indonesia recertification requirements. DBE also promotes the use of information technology for education; the importance of early childhood education; in-service teacher training; and non-formal work and life skills.Opportunities for Vulnerable Children: This program prepares the foundation for an inclusive education system by focusing on the educational rights and needs of children with visual impairments (blindness and low vision) by using an effective model for inclusion of students with visual impairments within the public education infrastructure that benefits both students with visual impairments and other disenfranchised populations. These activities have led toasubstantial increase in the number of children with visual impairments attending school, and increases in the availability and quality of inclusive education services. Replicable models are being developed to expand the reach of the program to Aceh, South Sulawesi, and Central Java. In partnership with Indonesian local universities and Hilton Perkins International,apre-service university-level program is developed to equip new teachers with effective teaching strategies and clear understanding of children with special needs.Sesame Street Indonesia/Jalan Sesama: In partnership with the Sesame Workshop, USAID is supporting the development ofanew Indonesian co-production of the renowned Sesame Street television show. Indonesia’s “Jalan Sesama” is one of the largest partnerships between USAID and the Sesame Workshop. By watching “Jalan Sesama” millions of Indonesian children will be better equipped to start and stay in school. The program went on the air in 2007 and more than3million Indonesian children have viewed the broadcast. The show is currently ranked second in its time slot.Higher Education: The Indonesia Education Initiative, run by the Public Affairs Section (PAS) of the U.S. Embassy, complements USAID’s Basic Education Programs witharange of educational scholarships and exchanges, and English language learning opportunities. A partnership with the University of Kentucky is assisting three Indonesian universities to upgrade their academic programs in areas critical for economic growth such as agriculture, business, engineering, and public administration. A three-way partnership between USAID, the Government of Aceh Province, and Chevron supports the development of the Aceh Polytechnic,anew institution to provide quality education in applied technology fields such as information technology and electrical engineering that are in high demand in the region. A far more robust higher education program by PAS and USAID will commence in late 2009.Effective Democracy and Decentralized Governance: This objective aims to support democratic reforms by supporting effective and accountable local governance, addressing conflict and encouraging pluralism, and consolidating national-level democratic reforms.Mitigation of Conflict and Support for Peace: USAID isakey donor working to mitigate conflict and build peace in post-conflict areas, such as Aceh, Papua, Central Sulawesi, and Maluku. Assistance activities focus on: conflict resolution/mitigation; civilian-military affairs; livelihoods development in conflict areas; drafting and monitoring of relevant legislation; and emergency and post-conflict transitional assistance to conflict-affected persons.Fighting Trafficking in Persons: USAID is assisting the Government of Indonesia and civil society to develop policies and procedures to prevent trafficking in women, girls, and men and provide protection to survivors of trafficking. The USAID Trafficking in Persons program is expected to end in late 2009. Justice Sector Reforms: This includes support for the bureaucratic reform efforts of the Attorney General’s Office through technical assistance and training for prosecutors. USAID also works with the Supreme Court and the Constitutional Court to developamore effective, professional, transparent, accountable, and independent executive branch.Legislative Strengthening: USAID provides institutional support to the National House of Representatives, National Regional Representative Council, and over 60 district legislative councils. Activities include promoting constituency and media outreach; developing the capacity to draft and analyze legislation and operational budgets; and supporting legislative commissions to carry out their functions.Local Governance Strengthening and Decentralization Support: This activity supports Indonesia’s decentralization through assistance to more than 60 local governments to increase governmental accountability and transparency, strengthen the local legislative process, promote citizen engagement, improve the planning and budget process, and promote more responsive public services. At the national level, USAID supports the Government of Indonesia and civil society to improve decentralization policies.Promoting Democratic Culture: USAID supports civil society organizations and government institutions to strengthen democratic civic culture, respect for pluralism, religious diversity, and the rights of women and minority groups. Activities under this program include civic education, advocacy, engaging traditional leaders, building networks to support tolerance and pluralism, and assisting the government in reviewing policies that conflict with the constitution and human rights standards.Elections and Political Process: USAID supported the 2009 parliamentary and presidential elections through an elections support package that included political party development, election administration, voter education, election monitoring, and oversight and strengthening of the legal framework. Tsunami Reconstruction: The U.S. Government was one of the first donors to respond to the disaster. Through numerous grants to non-governmental organizations (NGOs), international organizations, and UN agencies, USAID has helped stabilize the humanitarian situation in Aceh, avertapublic health crisis, and provide relief services to survivors.Rebuilding Shelter and Key Infrastructure: USAID is assisting communities by providing much needed shelter, working with the Indonesian Government to rebuild key infrastructure and ensuring proper mapping and planning is considered through local cooperation.Restoring Livelihoods: USAID enables communities to direct capacity building to benefit people at the local level. USAID's Community Based Recovery Initiative is working with 59 villages to organize local capacity-building initiatives.Strengthening Capacity and Governance: USAID is providing assistance to restore local government services in Aceh, working to increase governmental accountability and transparency, strengthen the local legislative process, promote citizen engagement and civil service reform, and improve the delivery of basic services.http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2748.htm
Having good human resources and also international educational fairs are the good reconstructions and reinforcement for every developing countries .If we need business developments or co-operations or being rich , it is better invite to the people who is working at investments world wide .If we need more strong internationalized educations systems , we need to invite more people who is working at this entired education systems world wide.So look at the world wide , notascope at the nearby countries at one continents , surely look at the world wide and make more meetings by inviting them inside country.Get more government Cross Trainings or Teaching programs by inviting officials from the first leading or developed countries ,government by government .And aslo ,not only being the International Education Fairs at capital cities, but also can do same ideas at the other states or provinces at the same time by showing interests to educations , profits or markets needs form that regions.
MMES ၏ အထက်ပါ ၀န်ဆောင်မှုများတို့သည် မလေးရှားအဆင့်မြင့် ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာန (Malaysia Ministry of Higher Education) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မလေးရှားသံရုံး (Malaysian Embassy, Myanmar) တို့၏ ပံ့ပိုးမှု၊ အပြည့်အ၀ အသိအမှတ်ပြုမှုများအားဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Malaysia My Second Home Programme အားဖြင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်မှီသော မိဘများကို (၁၀)နှစ်သက်တမ်းနှင့် အထက် အထွေထွေဗီဇာရရှိခြင်းအားဖြင့် သားသမီးများနှင့်အတူ Malaysia တွင်နေထိုင်ခွင့်ပြုမည့် အစီအစဉ်များကိုလည်း ဆောင်ရွက် ပေး လျက်ရှိပါသည်။ MMES မှ ဤကဲ့သို့ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အကြံဥာဏ်ပေးခြင်း အစရှိသော ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျောင်းသားနှင့် မိဘများအပေါ် မည်သည့်ဝန်ဆောင်ခမျှ ကောက်ခံခြင်းမရှိပဲ အခမဲ့ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ No. 26B, 2nd Floor, SS3/33, 47300Petaling Jaya, Selangor, MalaysiaTel: +60-3-78754676Fax: +60-3-78742390Email: MMES.MM@mastech-tech.comNo. 908/1010 Myaing Hay Wun, Tower B,Junction 8, Kyaik Wyne Pagoda Road,Mayangone Township, Yangon, MyanmarTel: +95-1-650979,4412870Fax: +95-1-662191 Tel : 95-1-650979,4412870 http://myanmartraining.com/mt/categories/training_view.asp?tid=117&tname=Malaysia+Myanmar+Education+Service+%28MMES%29&type=detail&ctype=atozKMD Computer Centre Oversea Studies Counseling Service သည် 1. James Cook University (Singapore) – website address www.jcu.edu.sg 2. Assumption University (Thailand) – website address www.au.edu 3. AEC Business School (Singapore) – website address www.aec.edu.sg 4. Informatic Institute (Singapore) website address www.informatic.com 5. EF Brittin College (UK) website address www.brittin.com 6. Middlesex University (UK) www.mdx.ac.uk 7. Northumbria University (UK) website address www.northumbria.ac.uk 8. Nilai University College (Malaysia) website address – www.nilai.edu.my 9. Taylor’s College (Malaysia) website address – www.taylors.edu.my 10. Nottingham University (Malaysia) website address – www.nottinghom.edu.my ကျောင်းများသို့ apply လုပ်လိုသော ကျောင်းသားများအတွက် အခမဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။KMDNo 550-552, Trader Road, Ktda Tsp, Yangon. Email : business@kmd.com.mm Tel : 249 155, 381 776, 381 035 Website: www.kmd.com.sg
On Job Training IT in Myanmar
Anyone who have Diplomas or certificates in IT or Programming , can apply for on-job-Training3months together with 2Photos,Educational Certificates, to MPEC no112,room 11-12,8 miles, Pyay Road,Yangon.Ph:668779,668259 (24-11-2009) Source: Internet Journal Posted by
One Children One Laptop $260++ or One IPod Touch $199 per Child?
How the important of one children one latop program which include low-cost laptop computer ,learning softwares, is open door to explore their school exercisesIt is also wanderful ideas of The One Laptop Per Child Association, Inc. (OLPC) US non-profit organization. What all the children in developing countries need is more investment in educational tools like laptops loaded with useful softwares, internet available at no cost, and of course good and well trained tutors, facilities, etc. Information and the freedom and ability to get it ,which is crucial to develop the nation.Each computer costs $260 (including teacher-training and connection charges) and the estimated annual maintenance cost is $21. In total, the scheme has cost less than 5% of the education budget but how's about the up to 50% breakage rate in one year???what the repair costs were on average? Possibly $100 each or more.However the choice ofalow power, low quality device leavesalot to be desired.Best choice may beacool, high quality but low cost iPod Touch which has everything likealaptop has ,but fits inapocket and costs from only $199.Find out more at https://en.wikipedia.org/wiki/One_Laptop_per_Childhttp://en.wikipedia.org/wiki/IPod_Touch
Guinea locate at coastal region in W Africa,and also called French Guinea which is an independent republic in W Africa, on the Atlantic coast. 96,900 sq. mile (251,000 sq. km). Capital: Conakry.USAID-Guinea financed the participation of primary, secondary, and professional schools in the GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) programme by donating one laptop to each of the schools for the students and teachers to collect data. Activities covered atmospheric research, soil, earth, biological, and geological data and information gathering using scientific instruments provided by GLOBE.Find out more about this article athttp://www.google.ae/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=32&ved=0CAwQFjABOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.infodev.org%2Fen%2FDocument.407.pdf&rct=j&q=FAO+donation%2B1+%24+per+week&ei=bb7_SseSEYKTkAWWrfzuCw&usg=AFQjCNEF3vOZwvcnWLc5pA1O30yd4BXMUg&sig2=bs2x4P3vlbUL47NgF3Nt3University Libraries in Croatiahttp://www.cenl.org/docs/annual_reports/croatia98-99.pdf
Aung HtunCreate Your Badge
Interview with Billionaire Fund Manager - Paul B. ...